Archive du 20190308
Fanolorana anarana depiote Miditra an-tsehatra mihitsy ny filoham-pirenena
Manomana fatratra ny fifidianana solombavambahoaka ny antoko politika lehibe amin`izao.
Tonga ity ny andron'ny valo martsa niandrasana ela Natokana ho an'ireo vehivavy na ampela Reny nahitana masoandro, nitondra antsika sivy volana Mitaiza sy mamelona, miahy raha sendra olana
Vary mora Fanompana an-kitsirano ny tantsaha
Efa any anaty sambo, hono, ny vary mora hamidy amin’ny vahoaka Malagasy hitsinjovana azy amin’ny fahasahiranana. Tamin’ny 19 desambra i Andry Rajoelina no nilaza izany.
Voafonja Mbola miandry fitsarana ny 60%
Niroborobo ny fisamborana tato ho ato na ny tsy fandriampahalemana na ny kidnapping na ny raharaha maro samy hafa.
Nanao fanambarana ampahibemaso ny fikambanana Hafari Malagasy nilaza fa faly tanteraka ry zareo fa na dia sorona aza ny filohany Rafanomezantsoa Jean Nirina noho ny fitarihany niaraka tamin’ireo
Ligin’ny Basikety Analanjirofo Raikitra ny Basikety 3 x 3 « Anda Hidôla »
Ho fampiharana ny nifanarahana tamin’ny AG « Fivoriamben’ny Federasion’ny taranja Basket Malagasy »
Champions Leauge any Eoropa Boribory tokoa ny baolina
Tamin’ny nihintsanan’ireo ekipa kalaza andrandrain’ny maro dia ny Real de Madrid Espagne sy ny Psg Frantsa teo amin’ny 1/8-dalan’ny fifaninanana Champion’s League any Eoraopa tamin’ny talata 5 sy
MPAKA ANKERINY TSARATANANA
Olona valo no voasambotry ny mpitandro ny filaminana izay ahiana ho nandray anjara mivantana tamin’ny fakana an-keriny olona dimy tany Tsaratanana, nahitana ilay sefo ZAP.
Tsy fanajana zon`olombelona Manameloka ny Frantsay ny Firenena Mikambana
Voalaza ao amin’ny lalàmpanorenana sy ny lalàna fa tsy azo atao ny manohintohina ny vatana sy fahasalaman’ny olombelona.
Biraom-pokontanin’Antaninandro Ampandrana Nohavaozina 90%
Notokanana ny maraina teo ny biraon’ny fokontany Antaninandro Ampandrana, izay nohavaozina 90 % ny trano sy ny fitaovana tao aminy.